Hunter- စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း B2B ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။ Martech Zone
Hunter- B2B ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဘယ်လိုရှာမလဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 27, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 27, 2022 Douglas Karr
သင့်လိပ်စာစာအုပ်တွင် မရှိသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာကို အမှန်တကယ်ရယူရန် လိုအပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် LinkedIn အကောင့်တစ်ခုသို့ မှတ်ပုံတင်ထားသော လူမည်မျှရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်အမြဲအံ့သြမိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ကျွန်ုပ်တို့ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေကြည့်ကာ ၎င်းတို့အား အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါ... ထို့နောက် မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုမှ မရပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုက်များတစ်လျှောက် တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ် အင်တာဖေ့စ်အားလုံးကို ဖြတ်သန်းပြီး နောက်ဆုံးတွင် တုံ့ပြန်မှုမှာ… “အိုး၊ အဲဒီအီးမေးလ်လိပ်စာကို ဘယ်တော့မှ မစစ်ဆေးဘူး။” ဒို့!
Hunter- ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ရှာပါ။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မုဆိုး. နေ့တိုင်း၊ Hunter သည် လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းဒေတာကို ရှာဖွေရန် သန်းပေါင်းများစွာသော ဝဘ်စာမျက်နှာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့သည် ဝဘ်တစ်ခုလုံး၏ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုကို အဆက်မပြတ်သိမ်းဆည်းကာ အခြားဒေတာဘေ့စ်တွင်မရှိသော အချက်အလက်များကို စုစည်းထားသည်။
Hunter က ရှာပေးတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်လိပ်စာများ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ Hunter ကိုအသုံးပြုရန်၊ သင်သည်သင်၏ဒိုမိန်းကိုရိုက်ထည့်ပြီးနှိပ်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရှာပါ။.
ရလဒ်များသည် အီးမေးလ်လိပ်စာများအတွက် ဘုံပုံစံများအပြင် အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ရင်းမြစ်အရေအတွက်ကို ပေးဆောင်သည်။ အရင်းအမြစ်များကို နှိပ်ပြီး ဒေတာရှာတွေ့သည့်နေရာနှင့် အချိန်ကိုပင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်-
မုဆိုး သင့်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-
အမည်ဖြင့်ရှာဖွေပါ - တိကျသောလူတစ်ဦး၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစာရင်းသွင်းခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန် domain တွင်အမည်၊ နောက်ဆုံးအမည် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုဖြင့်ရှာဖွေပါ။
အီးမေးလ်လိပ်စာကို အတည်ပြုပါ။ - အီးမေးလ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး ၎င်းသည် မှန်ကန်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။
စာရေးဆရာရှာပါ။ - အွန်လိုင်းဆောင်းပါးများမှစာရေးဆရာများ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရှာပါ။
Hunter Sales Outreach
သင်သတ်မှတ်ထားသော အဆက်အသွယ်တစ်ခုစီ မုဆိုးaသို့ထည့်နိုင်သည်။ ခဲစာရင်း နှင့်သင်အသုံးချနိုင်သည်။ အေး အီးမေးလ်ကမ်ပိန်း သင်၏ Google Office သို့မဟုတ် Microsoft အီးမေးလ်အကောင့်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်။ သင့်အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းမှ အီးမေးလ်ကို အမှန်တကယ် ပေးပို့သောကြောင့် ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စိတ်ကြိုက်ပုံစံများ ဖန်တီးနိုင်သည်။
အကောင့်ဖွင့်ရင် မုဆိုးပလပ်ဖောင်းသည် တစ်လလျှင် ရှာဖွေမှု 25 ခုအထိ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရှာပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် မုဆိုး ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ သူတို့ရဲ့ Affiliate link ကို ကျွန်တော် အသုံးပြုနေပါတယ်။
Tags: b2bb2b အီးမေးလ်လိပ်စာဆောအေး အီးမေးလ်စာရင်းအီးမေးလ်စာရင်းပြုစုပါဆောက်စာရင်းအေးအီးမေးလ်အဝေးရောက် အီးမေးလ် အအေးဒိုမိန်းအီးမေးလ်ရှာဖွေမှုအီးမေးလိပ်စာအီးမေးလ်လိပ်စာ ဒိုမိန်းအီးမေးလ်ကစာရင်းအီးမေးလ်အီးမေးလ်အလားအလာစာရေးသူအီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာပါ။အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရှာပါမုဆိုးအဝေးရောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်လိပ်စာအီးမေးလ်လိပ်စာအတွက်ဒိုမိန်းရှာဖွေပါ။အီးမေးလ်လိပ်စာကို အတည်ပြုပါ။
Douglas Karr Wednesday, April 27, 2022 Wednesday, April 27, 2022
Postaga- AI ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် Intelligent Outreach Campaign Platform တစ်ခု
သင်၏အရောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် CRM ဒေတာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းရန် အဆင့်4ဆင့်